Ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ site n'aka ndị na-eto eto | Ndị nne Taa
Ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ site n'aka ndị nọ n'oge uto
Nke Torres | | Atụmatụ, Ahụike
Ọ bụrụ na ị nwere ndị na-eto eto ma ọ bụ na-achọ ịbanye n'ọnọdụ ahụ siri ike, ọ dị ezigbo mkpa na nata akwukwo banyere nmezi nwoke na nwanyi. N’agbanyeghị na o nwere ike isiri gị ike iche n’echiche nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị inwe mmekọrịta, ọ bụ ihe onye ọ bụla ga-agabiga. Ọchịchọ anụ ahụ bụ ihe okike, ọ bụ kemistrị dị ọcha na oge uto ya na mgbanwe mgbanwe nke mmiri ọgwụ bụ nrụgide nrụgide na nke a.
Ebe ọ bụ na ị gaghị egbochili nwa gị ka ya na ya nwee mmekọahụ, ọ dị mkpa ka gị na ya gwa ya hoo haa. Nke mere na nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwaanyị nwere ngwaọrụ gị mkpa iji na-eme mma mmekọahụ ma si otú a zere nsogbu ndị dị ka afọ ime na-akwadoghị ma ọ bụ ihe ize ndụ nke ibute a ọrịa mmekọahụ. Ime ka ụmụ gị mata ihe ize ndụ nke omume mmekọahụ na-adịghị ize ndụ dị oké mkpa ka ha wee mara ụzọ isi mee mkpebi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
1 Na-ekwu okwu n'ezoghị ọnụ banyere ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ
2 Ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ
3 Nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị ebutela ọrịa a?
Na-ekwu okwu n'ezoghị ọnụ banyere ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ
Kidsmụaka nke taa nwere ike nweta ozi sitere na isi mmalite dị iche iche, ikekwe ha kwadebere nke ọma karịa ndị ntorobịa nke afọ iri ole na ole gara aga. Agbanyeghị, ịnweghị iji ya gwurie egwu, ebe ọ bụ na ịgha ụgha bụ isi ihe na-akpata nje nke ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ. Jide n'aka na umuaka nwere ihe omuma banyere oria ojoo na otu ha si efe efe.
Gịnị bụ ọrịa a na-ebute site ná mmekọahụ? Nke a nwere ike ịbụ ajụjụ mbụ ịchọrọ iji dozie, iji lebara isiokwu ahụ anya nke ọma. Ọrịa ndị a bụ ihe na-ebute site ná mmekọahụ, (enweghi ike, gbasara ike ma ọ bụ ọnụ). Offọdụ n'ime ọrịa ndị a na-agbasa site na mmekọrita nwoke na nwanyị, ọbụlagodi na mgbanwe mmiri ahụ.
Mostzọ kachasị dị irè maka mgbochi nke ọtụtụ ọrịa a na-ebute site na mmekọahụ, bụ ojiji nke condom. Ọ dị ezigbo mkpa ka ndị na-eto eto ghọta na onye ọ bụla nwere ike ibute ụdị ọrịa ndị a, ọbụlagodi ụfọdụ n’ime ha egosighi mgbaàmà ọ bụla. Ya mere, ha kwesiri iji condom mgbe ọ bụla ha nwere mmekọahụ, ọbụlagodi na onye kwụsiri ike ma tụkwasị obi.
Ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ
Offọdụ ụdị ọrịa ndị a na-ahụkarị n'ụdị a nwere ike iji ọgwụ mgbochi wee gwọọ ha ma ọ bụrụ na emesịa ha n'oge, a ga-agwọ ha n'emeghị ka ọ pụta. Ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, enweghị ọgwụgwọ ma nwee ike kpatara nsogbu siri ike dịka enweghị ike ịmụ nwa, n'etiti ndị ọzọ.
Ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ Kacha nkịtị bụ:
Chlamydia: Nwere ike imetụta cervix, ikensi, ma ọ bụ akpịrị n'ihe banyere ụmụ nwanyị. N'ebe ụmụ nwoke nọ, na mgbakwunye na akpịrị ma ọ bụ ikensi, na urethra.
Ọkpụkpụ herpes: Ọ na-agbasa site na penetration, gbasara ike, mmamiri ma ọ bụ ọnụ. Ọkpụkpụ genital ọ nweghị ọgwụgwọ, ọ bụ ezie na a pụrụ iji ọgwụ na-agwọ ya.
Ogwu akwara: O bu oria na enwe oria nke nwoke na nwanyi. Enwere ike iji ọgwụ agwọ ya, mana ọ bụrụ na agwọghị ya n'oge, ọ nwere ike kpatara nsogbu dị egwu.
Ọrịa HIV: A ajọ ọrịa na na-emetụta usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, nakwa na enweghi ọgwụgwọ. Ọ bụ ezie na ọgwụgwọ dị irè dị taa, afọ ole na ole gara aga, ọ kpatara ọnwụ nke ọtụtụ puku mmadụ.
Nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwanyị ebutela ọrịa a?
Ọ dịkwa ezigbo mkpa na ụmụ nwoke maara ihe mgbaàmà kachasị, ka ọ bụrụ na ha bute nke ọ bụla n’ime ọrịa ndị a, ha pụrụ inweta ọgwụgwọ dị irè ngwa ngwa o kwere mee. Ihe mgbaàmà kachasị bụ:
Mgbu mgbe urinating
Ihe na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ n'ihe banyere ụmụ nwanyị
Ihapu si amụ n'ihe banyere ụmụ nwoke
Akpịrị na akụkụ ahụ nwoke, n'ime apata ụkwụ, gburugburu ike ma ọ bụ n'ọnụ
Mgbu mgbe ị na-enwe mmekọahụ nwee mmekọahụ
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọrịa ndị a anaghị egosipụta ihe mgbaàmà ọ bụla na nke a na-eme ka o sie ike ịgwọ ọrịa ahụ n'ụzọ dị irè. Ọbụna, ụmụ nwoke nwere ike ha agaghị a attentiona ntị mgbanwe ndị a ma ọ bụ amaghị etu esi achọpụta ihe na-adịghị mma. Y’oburu na odi nkpa ka gi na ha kwue ihe ha bu n’obi, ka ha we nwe ha ihe omuma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Nlekọta » Ahụike » Ọrịa na-ebute site ná mmekọahụ site n'aka ndị nọ n'oge uto
Egwuregwu tennis na ụmụaka, ihe kpatara ya na ọgwụgwọ
Graduallyhapụ pacifier nke nta nke nta